शनिबारको बिदा : यसरी मनाउँदा काइदा - samayapost.com
शनिबारको बिदा : यसरी मनाउँदा काइदा
समयपोष्ट २०७४ पुष ८ गते ८:३७
आज शनिबार । फुर्सदको दिन । बिदा कसरी मनाउने ? धेरै मानिसहरुलाई यही अन्यौल हुन्छ । महिला तथा गृहणी त घरमा नुहाउने र लुगा धुने काममै व्यस्त हुन्छन् । तर, सँधैको शनिबार लुगा धुने र नुहाउने काम नहुन पनि सक्छ । अहिलेको यो पुसको ठिहिर्याउने जाडोमा घरमै कक्रक्कीएर बस्नु पनि त भएन । यसो बाहिर निस्क्नुपर्यो, पारिलो घाममा सेकिनुपर्यो, कुनै चउरमा गएर बदाम र सुन्तला खानुपर्यो । भिटामीन डिको भरपुर श्रोत मानिने घाम पनि त ताप्नुपर्यो । कि कसो ? शनिबारको बिदा सदुयपोग गर्ने केही टिप्स यहाँ दिइएको छ :
शहरमा कोलाहल, धुलो र धुवाँ कतिसारो छ भने मानिसहरु बाहिर निस्कनै अत्यास मान्छन् । यस्तो बेलामा शहरमा घुमघाम गर्न पनि त्यही सहज छैन । त्यसैले घर आसपासकै कुनै चउरमा बसेर शनिबारको फुर्सद घाम तापेर पनि मनाउन सकिन्छ ।
भक्तपुर धुन्चेपाखाकी गृहणी पार्वती पौडेललाई पारिलो घाममा सुन्तलाका केस्रा चुस्दै बदाम खान औधी मनपर्छ । अझ बडेमाको पाकेको भोगटे होस् । उनी पुस माघको जाडोमा बिदाको सदुपयोग गर्दै भोगटे साँधेर खाने गर्छिन् ।
‘भोगटेमा सून्तला, रातो न रातो अकबरे खुर्सानी, चिनी, नुन र दही हालेर मोलेपछि खास्साको हुन्छ’, पार्वती भन्छिन् ’, ‘यसरी तयार भएको भोगटेमा मेथी फुराएको तेलले झान्नुपर्छ, अनि त यसको स्वादै खास्सा हुन्छ ।’
घाम ताप्ने क्रममा बदाम पनि खान सकिन्छ । टिमुर र हरियो खुर्सानी हालेर पिसेको नुनसँग बदाम खानुको मजै बेग्लैछ । पार्वतीकै छिमेकी गिता कँडेल पनि पुसको जाडोमा बदाम किनेर ल्याउँछिन् र चउरमा बसेर छोडाएर खान्छिन् । उनको विचारमा बदाममा प्रोटिनका साथै पर्याप्त मात्रामा दिमागलाई काम लाग्ने तत्वहरु पाइन्छन् ।
पारिलो घाम ताप्दा आफुलाई मनपर्ने गहकिला पुस्तक, उपन्यास या पत्रिका पढ्न सकिन्छ । वाइफाइ कनेक्सन छ भने त झन राम्रो । पारिलो घाम ताप्दै फेसबुक चलाए पनि भो, यटूबमा म्युजिक भिडियो या फिल्म हेरे पनि भो ।
कतिपयले बिदाको दिन घाम ताप्दाको समयको सदुपयोग पनि गर्ने गरेका छन् । महिलाले सुइटर या टोपी बुन्ने, तरकारी केलाउने या अन्य काम गर्ने गरेका छन् । लेखक या पत्रकार छन् भने घाम ताप्दै ल्यापटपमा कुनै लेख या किताब पनि लेख्ने गरेका छन् । घाम तापेर लेखपढ गर्नुको पनि मजा बेग्लै हुन्छ ।
अहिलेको मौसम कस्तो हो भने हिमाल छर्लंगै देखिन्छ । सोही कारण कतिपय मानिस यहीबेला आसपासका पहाड उक्लीएर हाइकीङ जाने गर्छन् । राजधानीबासीका लागि हाइकीङ सहज छ । चन्द्रागिरी डाँडो उक्लीए पनि भो, चम्पादेबी हाइट चढे पनि भो । उता उत्तरतिर ककनी लागे पनि भो, शिवपुरीको जँगल छिचोले पनि भो । फुलचोकीमा हिउँ परेको छ भने त झन काइदा ।
काठमाडौं आसपासका हाइकीङ रुटहरु धेरै रमाइला छन् । चम्पादेबी डाँडाको टुप्पोमा एकै दिनमा पुग्न सकिन्छ । डाँडाको टुप्पोमा पुगेर यसो उत्तरतिर नियाल्दा उत्तरमा जुगल हिमाल र गणेश हिमाल टलक्क टल्कीएको हामी देख्नसक्छौं । लहरै हिम श्रृंखलाको दृश्य हेर्न चन्द्रागिरीको उकालो चढ्न पनि सकिन्छ । अचेल ति डाँडाहरुमा सेल्फी खिच्नेहरुको ताँती लाग्छ । यसरी हाइकीङ जान रुचाउने पात्रहरुमध्ये एक हुन, साहित्यकार सुरेन्द्र महर्जन ‘अमर’ । हालै आफ्नो गीत सँग्रह ‘अमर–२’ बजारमा ल्याएका अमर भन्छन्, ‘म त चान्स पायो कि साथीहरुसँग मिलेर हाइकीङ गर्दै चित्लाङतीर हान्नीन्छु ।’
चित्लाङमा चित्ताकर्षक छ । त्यहाँ देवेन्द्र नेपालको चित्लाङ अग्र्यानिक भिलेज रिसोर्टमा गएर एक रात बस्न र रमाउन सकिन्छ । अचेलको तन्नेरी पुस्ता त्यहाँ शुक्रबार गएर शनिबार फर्कने गरेका छन् । होली डे हाइकीङका पारखीहरुको एउटा सुन्दर गल्तब्य चित्लाङलाई अचेल चन्द्रागिरी केवल कारले समेत धेरै सघाएको छ । केवलरकारमा माथिसम्म पुगेर चित्लाङतिर र नियाल्दा जसलाई पनि घुम्न मन लागिहाल्छ ।
यसैगरी हाइकीङ जानेहरुले लाकुँरी भन्ज्याङ र भक्तपुरका बल्थलीतिरका एरीया पनि छिचोल्नसक्छन् । बल्थलीमा होमस्टेको ब्यवस्था छ । साँखु हुँदै नगरकोट निस्कने अर्को रमणीय रुट पनि छ । कम्तीमा दुइ हजार रुपैयाँ खर्चमा एक नाइट बिताउने खालको हाइकीङ गर्न सकिन्छ ।
बिदाको दिन सदुपयोग गर्ने अर्को उपाय हो, फिल्म हेर्ने । अचेल हरेक शुक्रबार नयाँ नेपाली चलचित्र रिलिज भइरहेका हुन्छन् । हिन्दी चलचित्रहरु पनि आइरहेकै हुन्छन् । चलचित्र मनोरँजनको एक राम्रो आयाम हो । यसले साताभरीको तनावबाट पनि मुक्ती दिन्छ । मनोबिनोदले मनमा नयाँ उर्जा दिन्छ । आफुलाई मनपर्ने कलाकारको फिल्म हेर्ने, घुम्ने, मनपरेका कपडा किन्ने गरेर पनि बिदाको सदुपयोग गर्न सकिन्छ । अहिले हलमा सलमान खानको ‘टाइगर जिन्दा है’ चलिरहेको छ । नेपाली चलचित्रहरुको त कुनै कमी छैन ।
यदि कोही प्रेम सम्बन्धमा छ भने डेटीङ जानका लागि शनिबार उपयुक्त छ । अरु दिन बरु पढाइमै ध्यान केन्द्रीत गर्ने, मेहनत गर्ने र शनिबार प्रियसीलाई लिएर कतै घुम्न निस्कने । शनिबार आफ्नो साथीलाई कुनै निश्चीत ठाउँमा बोलाएर जिवन र भविश्यका बारेमा गहन छलफल गर्ने । वासनारहित प्रेमको माहौल बनाउने ।
काठमाडौंमा मात्र हैन, मुलुकका कुनै पनि ठाउँमा युगल जोडीले मजाले डेटीङ गर्ने ठाउँ छैन । काठमाडौंका पुर्व मेयर केशव स्थापितले नागार्जुन डाँडोमा लभर्स पार्क बनाउने घोषणा गरेका थिए । तर, उनको सपना त्यत्तिकै रहयो । इटहरीका एक उम्मेदवारले त आकाशे पुललाई नै डेटीङ स्पट बनाउने घोषणा गरेका थिए ।
क्याबीन रेस्टुराँ, एकान्त चौर र जँगलहरुतिर डेटीङ जान भने युगल जोडीले छाडेका छैनन् । अतः नेपालमा एउटा राम्रो डेटीङ पार्क स्थापना हुनुपर्छ । यस्तो डेटीङ पार्क होस्, जसमा युवक र युवती अँकमाल गरेर किस खाँदै वार्तालाप गर्न पाउन् । त्यो प्रेमको पार्क होस् । त्यो पार्कमा प्रेमीहरुका लागि मात्र अनुमती होस् । यस्तो भयो भने युवक युवतिले प्रेमको पाठ पढनसक्छन् र जिवनमा उनीहरुका इच्छा दमीत हुँदैनन् । अन्ततः केटीलाई छुने, अँकमाल गर्ने र म्वाइ खाने कुरा उनीहरुका लागि सामान्य हुन जान्छ । अनि पो उनीहरुले त्यसबाहेकका अन्य रचनात्मक कुरामा ध्यान लगाउन सक्छन् ।
आर्यन् खानको जमानत याचिका पुनः खारेज
विवाह बन्धनमा बाँधिए हास्यकलाकार मनोज गजुरेल (तस्विरसहित)
आर्यनको जमानत याचिका खारेज हुँदा गौरीले थाम्न सकिनन् आँशु, हेर्नुहोस अदालत बाहिरको भाइरल भिडियो
शाहरुख खानका छोरा आर्यन अब जेलमा
एयरपोर्टमा लागुपदार्थसहित भेटिएकी थिईन् गौरी
रहेनन् ‘रामायण’मा रावणको भूमिका निभाउने अरविन्द त्रिवेदी